Ciidamada Maamulka Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo xalay ku dagaalamay buuraleyda Golis
Waxaa degan saakay xaaladda buuraleyda Golis oo xalay ay ka dhaceen dagaallo fool ka fool ah oo aan waxba la isula harin kaasi oo dhex maray ciidamada Dowlad goboleedka Puntland iyo maleeshiyaad taabacsan ururka Al-Shabaab.
Ilaa iyo 11 askari oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay dagaal deegaanka Sugurre ee gobolka Bari xalay saqdii dhexe ku dhexmaray ciidamada Putland iyo xoogagga Al-shabaab ee Buuraleyda Gollis.
Dagaalka oo markii hore ku bilowday qarax lala beegsaday ciidamada Puntland ayaa la sheegayaa in halkaasi ay waxyeello ka soo gaartay, hase yeeshee kaddib weerar lixaad leh oo ay qaadeen ciidamada Puntland ayaa la sheegayaa inay khasaare weyn ku gaarsiiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo iyagu ku sugnaa degaanka Sugure.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray labada dhinac, iyadoona la sheegayo in buuraleyda Golis ay ku sii qulqulayaan ciidamo ka tirsan maamulka Puntland, kuwaasi oo doonaya inay la wareegaan gebi ahaanba buuraleyda Golis ee degaanka Sugure oo xalay ay ka dhaceen dagaalada.
Dhinaca kale xoogagga ururka Al-Shabaab ayaa iyana la sheegayaa inay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo iyo isu hub urursi lixaad leh, iyadoona la sheegayo inay dagaalka ku biirayaan dagaalyahano ajaanib ah oo ka tirsan ururka Al-Qaacida.
Sida ay sheegayaan saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland dagaalka ayaa la sheegayaa inay ku soo qabteen maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab, wuxuuna sarkaal u hadlay ciidamada Puntland caddeeyay in dagaalka ay ka soo hooyeen guulo isla markaana ay khasaare gaarsiiyeen maleeshiyada Shabaab iyo Al-Qaacida.